Golaha Ammaanka ee Qaramadda Midoobay oo Cambaareeyey Dilka Saxafiyada u shaqeyn jirtay Aljazeera | Allbalcad Online
Home WARARKA Golaha Ammaanka ee Qaramadda Midoobay oo Cambaareeyey Dilka Saxafiyada u shaqeyn jirtay...
Golaha Ammaanka ee Qaramadda Midoobay oo Cambaareeyey Dilka Saxafiyada u shaqeyn jirtay Aljazeera
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay dilka weriyaha Aljazeera Shireen Abu Aqla, waxayna ku baaqeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo geerideeda.
Talaabadan ayaa daba socotay qaylo dhaan Jimcihii shalay ka dib markii booliiska Israa’iil ay garaaceen dad ku sugnaa aaska Abu Aqla. Booliska ayaa sheegay in ay falkaas sameeyeen kadib markii lagu tuuray dhagxaan.
Abu Aqla, oo 51 jir ah, ayaa lagu toogtay xaalado la isku khilaafay Arbacadii, iyadoo Israa’iil iyo Falastiiniyiintu ay ka ganacsanayeen.
Dilkeeda xilli ay ka warramaysay weerar ay ciidammada Israa’iil ku qaadeen Daanta Galbeed ee la haysto ayaa sababtay caro badan.
Bayaan uu soo saaray jimcihii, golaha ammaanka ayaa lagu sheegay in xubnahooda ay ku baaqeen “baaritaan degdeg ah, dhamaystiran, hufan, iyo cadaalad ah oo dhexdhexaad ah oo lagu sameeyo dilkeeda, waxayna carrabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la xaqiijiyo isla xisaabtanka.”
In kasta oo bayaanka uu muujiyay kiis naadir ah oo ku saabsan midnimada Golaha Ammaanka oo ku saabsan arrin la xiriirta Israa’iil, haddana warbixinnada laga soo xigtay ilo diblumaasiyadeed ayaa sheegay in ay jireen wada xaajood adag oo ku saabsan nuxurka qoraalka.
Shiinaha ayaa ku guuleystay in uu Mareykanka ku riixo in uu meesha ka saaro qodobbada lagu dhaleeceynayo xadgudubyada ka dhanka ah warbaahinta adduunka oo dhan, isagoo difaacaya xorriyaddooda oo uu ku boorriyay ilaalintooda marka ay soo tebinayaan howlgallada militari, wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay. Taa beddelkeeda qoraalka ayaa lagu yiri “wariyeyaasha waa in loo ilaaliyaa sidii rayid ahaan.”
Intii lagu guda jiray aaska Abu Aqla ee Jimcihii, naxashka ay ku jirtay ayaa ku sigtay inuu soo dhaco, iyadoo booliska oo qaarkood isticmaalayay budhadh ay dhex galeen dad badan oo Falastiiniyiin ah oo isku soo baxay.
Muuqaalo la soo duubay ayaa muujinayay iska hor imaad u dhexeeya booliiska iyo Falastiiniyiinta oo isugu soo ururay naxashkii yaallay meel isbitaal ah, ka hor inta aysan askartu dib u riixin dadkii isku soo baxay, iyadoo qaarkood ay garaaceen oo laayeen dad murugeysan. Booliiska ayaa sheegay in askarta “lagu qasbay in ay adeegsadaan habab rabshado wata”.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay António Guterres ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday iska horimaadyada u dhaxeeya ciidamada ammaanka Israa’iil iyo Falastiiniyiinta iyo hab-dhaqanka booliska qaarkood.
Mr Guterres waxa uu sidoo kale sheegay in ay “aad u qiiro galisay naxariista ay muujinayaan kumanaanka Falastiiniyiinta ah ee baroor diiqayay labadii maalmood ee la soo dhaafay” taasi oo uu sheegay in ay cadeyn u tahay shaqada iyo nolosha Abuu Aqla.
Abu Aqla, waa 51 jir Falastiini Mareykan ah, wuxuu ahaa weriye ruug-caddaa ah oo ka tirsan telefishinka Aljazeera qeybta wararka ee Carabiga, wuxuuna ka soo warami jiray colaadda Israa’iil iyo Falastiin muddo labaatan sano ah.
Maamulka Falastiin iyo Aljazeera ayaa ku doodaya in ay toogteen ciidamada Israel, halka Israa’iil ay sheegtay in aan weli la ogaan karin waxa dhacay oo ay suuragal tahay in ay ku disho rasaas Falastiini ah.
Warbixin ku meel gaadh ah oo milatariga Israa’iil soo saartay Khamiistii ayaa lagu sheegay in toogashada dhimashada ay ka iman karto “rasaas weyn oo ay fureen dableyda falastiiniyiinta ah”, ama laga yaabo inay ka timid “xabado yar” oo uu askari ku riday “argagixiso ku riday gaadhigiisa”.
Previous articleDiyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada oo ka socoto Muqdisho
Next articleDowladda Kuuriyadda Waqooyi oo Ku Tilmaantay Cudurka COVID-19 Musiibo weyn